NoirBits စျေး - အွန်လိုင်း NRB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NoirBits (NRB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NoirBits (NRB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NoirBits ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
NRB – NoirBits
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NoirBits တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NoirBits များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NoirBitsNRB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.286NoirBitsNRB သို့ ယူရိုEUR€0.242NoirBitsNRB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.219NoirBitsNRB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.261NoirBitsNRB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.58NoirBitsNRB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.81NoirBitsNRB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč6.38NoirBitsNRB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.07NoirBitsNRB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.382NoirBitsNRB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.399NoirBitsNRB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$6.4NoirBitsNRB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.21NoirBitsNRB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.55NoirBitsNRB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹21.43NoirBitsNRB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.48.2NoirBitsNRB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.392NoirBitsNRB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.433NoirBitsNRB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.91NoirBitsNRB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.99NoirBitsNRB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥30.26NoirBitsNRB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩339.77NoirBitsNRB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦109.73NoirBitsNRB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽21.06NoirBitsNRB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.92
NoirBitsNRB သို့ BitcoinBTC0.00002 NoirBitsNRB သို့ EthereumETH0.000735 NoirBitsNRB သို့ LitecoinLTC0.00503 NoirBitsNRB သို့ DigitalCashDASH0.00291 NoirBitsNRB သို့ MoneroXMR0.00307 NoirBitsNRB သို့ NxtNXT20.89 NoirBitsNRB သို့ Ethereum ClassicETC0.0415 NoirBitsNRB သို့ DogecoinDOGE81.48 NoirBitsNRB သို့ ZCashZEC0.00311 NoirBitsNRB သို့ BitsharesBTS10.87 NoirBitsNRB သို့ DigiByteDGB9.8 NoirBitsNRB သို့ RippleXRP0.991 NoirBitsNRB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00973 NoirBitsNRB သို့ PeerCoinPPC0.927 NoirBitsNRB သို့ CraigsCoinCRAIG128.67 NoirBitsNRB သို့ BitstakeXBS12.04 NoirBitsNRB သို့ PayCoinXPY4.93 NoirBitsNRB သို့ ProsperCoinPRC35.43 NoirBitsNRB သို့ YbCoinYBC0.000152 NoirBitsNRB သို့ DarkKushDANK90.55 NoirBitsNRB သို့ GiveCoinGIVE611.31 NoirBitsNRB သို့ KoboCoinKOBO64.18 NoirBitsNRB သို့ DarkTokenDT0.263 NoirBitsNRB သို့ CETUS CoinCETI814.91
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 22:55:03 +0000.